Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSudan eziQhekezayo » IRashiya ifuna isiseko seenqanawa eSudan, iSudan ifuna imali
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Iindaba zaseSudan eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ngokwengxelo ezithile, iSudan ngoku ifuna imbuyekezo ephezulu kakhulu yezemali kunye noncedo olwandisiweyo lwezemali lwaseRussia ngokuvumela ukusekwa kwesiseko somkhosi wamanzi waseRussia kunxweme lwaseSudan.
ISudan neRussia batyikitye isivumelwano sokuvula isiseko seenqanawa zaseRussia eSudan ngoDisemba ka-2020.
Isiseko sempahla yomkhosi wamanzi siyilelwe ukwenza ulungiso, ukuzalisa izinto kunye nabasebenzi beenqanawa zomkhosi waselwandle ukuba baphumle.
Akukho ngaphezulu kweenqanawa ezine zomkhosi waselwandle ezinokuhlala kwiziko lomkhosi wamanzi ngexesha, isivumelwano sangaphambili siyachaza.
Ummeli kaMongameli okhethekileyo waseRussia kwi-Middle East nase-Afrika ubhengeze ukuba umjikelo omtsha weengxoxo ububanjiwe phakathi kwamagosa asemkhosini wase-Russia nawaseSudan malunga nokuvulwa kwenqanawa yomkhosi wamanzi waseRussia kunxweme loLwandle oluBomvu. Usekela-mphathiswa wezokhuseleko waseRussia uthathe inxaxheba kwiingxoxo ngeli xesha.
"Bona (amagosa ezokhuselo) babambe uthethathethwano kwaye usekela-mphathiswa wezokhuseleko watyelela apho," utshilo uSekela Mphathiswa Wezangaphandle uMikhail Bogdanov ngoMvulo, ngaphandle kokuchaza iinkcukacha zothethathethwano.
Ngokweengxelo zangaphambili, iRussia kunye Sudan utyikitye isivumelwano sokuseka isiseko sempahla yaseRussia eSudan ekuqaleni kukaDisemba ka-2020.
Ngaphantsi koxwebhu, abasebenzi beziko lomkhosi wamanzi akufuneki badlule kubantu abangama-300.
Akukho ngaphezulu kweenqanawa ezine zomkhosi waselwandle ezinokuhlala kwiziko lomkhosi ngexesha, uxwebhu lucacisa.
I-Chief of the General Staff yase-Sudan u-Muhammad Othman al-Hussein wathi ngoJuni ukuba iSudan "ikwinkqubo yokuhlaziya isivumelwano esatyikitywa phakathi kukarhulumente wangaphambili wase-Sudan ne-Russia ngeprojekthi yomkhosi wase-Russia kunxweme lwe Ulwandle oluBomvu eSudan. ”
Impilo yeHlabathi: Ihlabathi elitsha emva kwe-COVID
Uphononongo lokuqala kuMntu lwesitofu esitsha se-COVID-19...